Dhamaan Ciidamada Mareykanka oo Maanta Gebi ahaanba ka baxaya Soomaaliya
Dhamaan Ciidamada Mareykanka oo Maanta Gebi ahaanba ka baxaya Soomaaliya Tiro aan la cayimin oo ciidamada Mareykanka ah ayaa la geyn doonaa dalalka dariska ah si ay u fuliyaan howlgallo xuduud ka tallaabid ah Dhammaan ciidamada Mareykanka ah ee ku sugan Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay maanta oo Jimce ah, 15-ka bisha January, isaga baxaan Soomaaliya. Taliska milatiga Mareykanka
Muxuu Midowga Yurub u hakiyay dhaqaalihii uu siin jiray Itoobiya?
Midowga Yurub ayaa waxay hakiyeen in ka badan 100 milyan oo doolar oo gargaar ahaan loo siin lahaa Itoobiya tan iyo inta hay'adaha gargaarka loo ogolaanayo inay galaan gobolka Tigrey si dadka halkaasi loo gargaaro. Wadamada Midowga Yurub ayaa waxay sheegeen in walaac xooggan ay ka qabaan wararka sheegaya in dilal lala bartilmaameedsanayo qowmiyado gaar ah iyo waliba
Warbixin Xasaasiya:Siyaasi Garan-waayey Saameynta Isbedelka Itoobiya ka dhacay oo Seeftu Jiidhay
Siyaasi Garan-waayey Saameynta Isbedelka Itoobiya ka dhacay oo Seeftu Jiidhay Seyoum Mesfin, oo ay dhawaan uun ciidammada Itoobiya dileen markuu diiday inuu is dhiibo, wuxuu ka mid ahaa asaasayaashii Jabhadda Xoreynta Dadka Tigray (Tigray People’s Liberation Front). Siyaasadda Soomaaliya saameyn weyn ayuu ku lahaa waayo wuxuu ku soo beegmay xilli Itoobiya u arkaysay
Siyaasi Cali Guray oo Warbixin Xasaasiya ka qoray Jabuuti & Dabley Weerarka ku qaaday Xarun ...
Siyaasi Cali Guray oo Warbixin Xasaasiya ka qoray Jabuuti & Dabley Weerarka ku qaaday Xarun Ciidan oo Jabuuti ku taala Djibouti Iyo Saamaynta Xaaladda Cusub Ee Geeska Afrika, gaar ahaan Itoobiya Maanta waxan BBCda ka dhegaystay in goob ciidan oo ku taala gobolka Tojura ee dalka Jabuuti koox dablay ah ay weerartay dhimasho iyo dhawaacna ay jiraan. Alleh ha sahlo eh dagaalada
Madaxweynaha mudada dheer xilka dalkaUganda Yoweri Museveni ayaa hogaaminaya tartanka madaxtinimada ka dib codbixintii Khamiistii dalkaasi ka dhacday, sida natiijooyinka hordhaca ah ay muujinayaan. Guddiga doorashada ee dalkaasi ayaa meesha ka saaray eedeymaha ku saabsan wax isdabamarinta codadka, oo uu soo jeediyay murashaxa mucaaradka Bobi Wine, oo ah fanaan isu badalay
Cali Rooba: "In ka badan 50% jidadka Mandera waxaa maamulo Al-Shabaab"
Barasaabka deegaanka Mandera ee woqooyi-bari kenya ayaa sheegay in ururka Al-Shabaab uu curyaamiyay waxbarashada, amniga iyo horumarka deegaanka Mandera. Cali Ibraahim Rooba ayaa sheegay in la curyaamiyay mustaqbalka shacabka Soomaalida ah ee ku dhaqan Mandera iyo guud ahaan gobolka woqooyi-bari Kenya. Waxa uu tusaale u soo qaatay dhibaatada dhanka waxbarashada ee ka jirta
Dhowr qof ayaa lagu dilay bariga dalka Kenya ka dib markii koox mintidiin islaamiyiin ah ay weerar gaadmo ah ku qaadeen gaari Bas ah oo halkaasi marayay. Goobjoogayaal ayaa BBC u sheegay
Qaabkii uu u dhacay weerarkii Jaamacadda Garissa
Maxkamad ku taala magaalada Nairobi ayaa saddex nin ku heshay dambi ah in ay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday jaamacadda Gaarisa, haddaba sidee ayay wax uga dhaceen gudaha jaamacadda?. BBC-da ayaa qoraalkan dib ugu eegeysa wixii dhacay. 3 bishii April 2015, afar nin oo hubaysan ayaa weerar ku qaaday jaamacadda Garissa ,iyaga oo si an kala sooc lahayn dadka u tooganayaay.
Ben Diris ayaa waxay qortay qoraalkan. In ku dhow 40 sano ka hor qoys British u dhashay oo is qaba dil loo geystay lagana helay Biyaha Caribbean, hase yeeshee qofkii dilkaasi geystay ayaa la la'aa meel uu jaan iyo cirib dhigay. Maanta wax weliba Internetka ayaa laga helaa sida arday iskuulka aad isla soo dhigan jirteen, saaxibbadaa hore, qof aad jecleyd iyo eey kaa fakaday
Taariikhda Waxbarasho,Shaqo & Siyaasadeed ee Wasiirkii Hore ee Arimaha Debeda Seyoum Mesfin oo Milateriga Itoobiya Khaarajiyeen
Kumuu ahaa Wasiirkii hore ee Arrimaha dibadda Itoobiya ee la dilay? Seyoum Mesfin wuxuu Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Itoobiya ayaa intii u dhaxeysay 1991-kii ilaa 2010-kii Milatariga Itoobiya ayaa Arbacadii sheegay in ay dileen Seyoum Mesfin, oo ka mid ahaa hoggaamiyeyaashii aasaasay xisbiga Tigray-ga ee Dhaqdhaqaaqa Xoreynta dadka reer Tigray (TPLF). Seyum, oo xilka Wasiirka
Hoggaamiyaha Taliban ee dalka Afghanistan ayaa soo saaray wareegto uu ku boorrinayo hoggaamiyeyaasha kooxda iyo taliyeyaasha inay iska daayaan guurka xaasaska badan, oo uu yiri wuxuu "kasbanayaa camabareyn ka timaadda cadowgeenna", sida uu ku warramayo weriyaha BBC-da Khudai Noor Nasar. Ragga Muslimiinta ah waxay diintu u oggoshahay inay guursadaan ilaa afar xaas,
Atariishada 69 jirka ah ee lagu fowdeeyay "sawirradeeda quruxda badan"
Markii Rajini Chandy ay dhowaan sawirro soo dhigtay barta Facebook, ma aysan filaneyn in sawirardeeda aad la iskula wadaagi doono ayna ka dhaxli karto fowdo. Sawirrada ayaa muujinaya atariishadan 69 jirka ah ee guri joogto ahaan jirtay, oo ku lebisan saari qurux badan, dhar dhaadheer, jeemis, iyo jeemis daba gaab ah. Sawirrada qaar waxay ku lebisan tahay saako ka sameysan
Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa ku horreeya codadka la tiriyay ee doorashada madaxtinnimo, sida ay muujinayaan natiijooyinka horudhaca ah ee uus saakay shaaciyay
Gantaalka cusub ee Kuuriyada Waqooyi ma wuxuu farriin u dirayaa Biden?
Kuuriyada Waqooyi ayaa daaha ka qaadday gantaal cusub oo badda hoosteeda ka dusa, warbaahinta dowladda ayaa ku tilmaantay "hubka ugu awoodda badan dunida". Dhowr gantaallada ka mid ah ayaa lagu soo bandhigay dhoollatus milatari oo uu goobjoog ka ahaa Kim Jong-un, sida ay shaacisay warbaahinta. Muujinta awoodda milatariga ayaa ku soo aadaya maalmo kahor caleema saarka
James oo Swan Baydhabo Booqday
Madaxweynaha dowlad gobaleedka KG Somalia iyo wakiilka XQM u qaabilsan Somalia oo magaalada Baydhabo booqday ayaa kawada hadlay arimaha siyaasadda dalka oo ay doorashadu ugu horreyso ...
Tan iyo markii uu xilka la wareegay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaa Soomaaliya dib loogu celiyay oo la masaafuriyay boqollaal Soomaali ah, iyada oo kooxdii u dambeysayna shalay laga duuliyay gobolka Minnesota ...
Shimbirtii lagu dili rabay Australia oo nasiib ku badbaadday
Shimbir ah nooca ay Soomaalidu u taqaanno "Qoolleey Xamaam" oo la qorsheynayay in lagu dilo waddanka Australia kaddib markii la sheegay in ay kasoo tallowday Dhinaca Mareykanka, ayaa la badbaadiyay markii baaritaanka ay boolisku wadeen lagu ogaaday in "ay aad ugu dhowdahay" inay tahay shimbir waddani ah oo reer Australia ah. Shimbirkan oo lagu magacaabo Joe
Kuuriyada Waqooyi oo dhoolatus sameysay,Soona bandhigtay Gantaalkii ugu Awooda weynaa Dunida ee laga rido Badda Hoosteeda
Gantaalka ayaa lagu soo bandhigay dhoollatus milatari Kuuriyada Waqooyi ayaa daaha ka qaadday gantaal cusub oo badda hoosteeda ka dusa, warbaahinta dowladda ayaa ku tilmaantay “hubka ugu awoodda badan dunida”. Dhowr gantaallada ka mid ah ayaa lagu soo bandhigay dhoollatus milatari oo uu goobjoog ka ahaa Kim Jong-un, sida ay shaacisay warbaahinta. Muujinta awoodda
Tacsi ku socota qoyska ilma Xaaji Ahmed Qulunbe
TACSI ANAGOO AH DHAMAAN QOYSKA ILMA
Joe Biden iyo La-tacaalidda COVID-19
Mareykanka ayaa weli ah dalka ugu badan oo waxaa uu xanuunka ku dhacay 23 milyan oo qof, dhimashaduna waxay ku dhowdahay 400 oo kun oo qof ...
Noticias Navarra 16 Jan 2021
Covid-19 : la campagne de dépistage massif à Roubaix se termine sur un bilan modeste
Le Monde 16 Jan 2021
RBC 16 Jan 2021
Em Rooz 16 Jan 2021